Properties for Sale in Dagon Myothit (Seikkan) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Dagon Myothit (Seikkan)
Township Dagon Myothit (Seikkan)
ရွှေတိဂုံဘုရားပါ ဖူးလို့ရတဲ့ ဧရာချမ်းသာ ကွန်ဒိုခန်းလေး ရောင်းပါမယ် ရှင့်
ဧရာချမ်းသာ executive condominium က view ကောင်း တဲ့ ထောင့်ခန်း...
Ad Number S-10166998
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် ရေ၊ မီးစုံပါရှိသော (ပေ ၂၀ x ၆၀) လုံးချင်းတိုက်သစ် (၂)လုံး...
440 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10164170
🔷 ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မူ့ဇုန်🔷 မြေကွက်ရောင်းမည်။
🔷 မြေအကျယ်-1 ဧက 🔷 အုတ်ခတ် 🔷 နေရာကောင်း 🔷 ဈေးနူန်း-6000/သိန်း 🔷 ဈေးနူ...
Ad Number S-10160633
၂၄ နာရီအပြည့်အဝလုံခြုံမူ ကားပါကင်ပါ ဓာတ်လှေကားလေးနဲ့ အေးဆေး နေလိုသူများအတွက်...
🔔 ၂၄ နာရီအပြည့်အဝလုံခြုံမူ ကားပါကင်ပါ ဓာတ်လှေကားလေးနဲ့ အေးဆေး နေလိုသူများအတ...
555 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10146747
*** ပုဏ္ဏမီ လမ်းမ​ပေါ် ​မြေကွက်အ​ရောင်း *** ​စျေးနှုန်း...
Ad Number S-10127482
*** ​ရွှေသံလွင်လမ်းမ​ပေါ် ​မြေကွက်အ​ရောင်း *** ​စျေးနှုန်း - 1850 ...
Ad Number S-10054082
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ၇၉ ရပ်ကွက်၊၄၀x၆၀ပေ၊ ပါမစ်မြေ၊ ပဲခူးမြစ်​လမ်း မှအောင်ချမ်းသာ...
610 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10174359
တောင်ဒဂုံ စီးပွါးရေးလုပ်ရန်ကောင်းတဲ့ စည်ပင်လမ်း အရောင်း
Ad Number S-10173639
New condo house for sale
Ad Number S-10168640
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှု့ဇုန် မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည်။
Ad Number S-10168515
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် (မြေကွက်) အရောင်း
Ad Number S-10166756
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၉၀ ရပ်ကွက် မြေကွက်အရောင်း
Ad Number S-10165613
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၉၀ရပ်ကွက် ၂ကွက်တွဲ
Ad Number S-10165579
ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်း ပထမထပ်ရှယ်ပြင် သိန်း270
Ad Number S-10161071